unyaka 1 10 edlule - unyaka 1 10 edlule #891 by i-bobrad79
Sawubona ... ngifake leli fayela elingenhla phakathi P3DI-v4 kepha izinsimbi azisebenzi,
Ngifake i-auto futhi ngizame ukufaka ngesandla.
I-Cheers Ithemba lokuthi umzimba othile ungasiza
BATHELE ABANTU BANGEKHONA ISIKHATHI ESILANDELAYO Ngizofunda ngaphambi kokuthunyelwa Inkinga enqunyiwe
Ukuhlela kokugcina: Unyaka we-1 izinyanga ezingu-10 ezedlule i-bobrad79.
unyaka 1 6 edlule #1065 by davgál1
Kuhle ntambama, iforamu:
Ngingathanda ukubuza mayelana ne-injini eqala kule ndege, ngoba njalo lapho ngiqala, ama-injini akhiqiza amandla aphelele cishe emaminithi angu-10, naphezu kwamandla ama-Power Levers asesimweni se-Idle, kanye ne-Condition Levers (inhlanzi).
Mina (kusobala) angenzi izinqubo zangempela zokuqala, kodwa izinqubo ezivela ku-PDF ye-addon.
unyaka 1 6 edlule #1066 by DRCW
Okokuqala khubaza uhlelo lwakho lokuphepha lwe-inthanethi, bese uphinde ufake uhlelo. Ngazise uma lokho kusebenza
unyaka 1 6 edlule #1084 by davgál1
Yenziwe, kodwa ayisebenzi ...
unyaka 1 6 edlule - unyaka 1 6 edlule #1085 by DRCW
Kulungile, ngizokulanda leli phakethe le-mega P3D I-V4 futhi ubone ukuthi yini ephezulu nokuthi ungayilungisa kanjani. Ngizobuyela nawe
Ukuhlela kokugcina: Unyaka we-1 izinyanga ezingu-6 ezedlule DRCW. Isizathu: Iyashintsha FSX kuya P3D V4
unyaka 1 6 edlule #1086 by DRCW
Ngenkathi ngilanda le software, ngibonile ekufundeni, ukuthi kukhona umbusi ophuzi okhulunywe ngawo ephasini le-throttle, okungeke kukuvumele ukuba ube ngaphezu kwe-10% ye-N1. Lo mbusi kumele asebenze ngenkathi eqala futhi ephazamiseka ekukhuphukeni. Uma ucabanga ukuthi uyazi lokhu, futhi ulandela inqubo, lokhu kungenzeka ukuthi kunesiphambeko ekukhokheni ikhodi. Gcina uthunyelwe
unyaka 1 6 edlule #1087 by DRCW
Kulungile ngibheke indiza, futhi empeleni inkinga iyinkinga yokufaka amakhodi phakathi kwepaneli yama-2D throttle kanye nesici sombusi. Uzokwazi ukuthi umbusi usephaneli le-2 D pop up, hhayi endaweni eyi-cockpit ebonakalayo. Ngesikhathi sokuqalisa, izilawuli zikaphethiloli zibonakala ziziqeda amandla. Kukhona ukungqubuzana phakathi kwamaphaneli we-virtual ne-2D. Azidlali ezimnandi. Iphaneli ebonakalayo ihlobene ne-default king air in P3D. Ngizokwenza abanye badlale nxazonke futhi babone ukuthi yini engingayenza
unyaka 1 6 edlule #1088 by i-daveh
Sawubona, ngisanda kulanda leli phakethe kuye FSX. Ngicabanga ngokweqiniso ukuthi lokhu kungenye yokulandwa okuhle engikukhiphe! Amanani wohlaka awathinteki, nemininingwane ye-cockpit (iphaneli ye-2D, ama-guits nokunye) iyamangalisa. Wenze kahle Rikooo!